मसँग लगेको रकम र लाने नेताहरूका नाम यस्तो छः राज्यलक्ष्मी गोल्छा - News Today
मसँग लगेको रकम र लाने नेताहरूका नाम यस्तो छः राज्यलक्ष्मी गोल्छा
व्यापारिक घराना गोल्छा परिवारकी बुहारी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् नियुक्त भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा अनुपस्थित भएको भन्दै एमालेले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । तर, गोल्छा आफू राजीनामा नदिने बताउँछिन् । भन्छिन्,‘म बिरामी भएर अनुपस्थित भएकी हुँ ।’ आफ्ना पति स्वर्गीय महेन्द्रकुमार गोल्छाले एमालेमा गरेका आर्थिक–सामाजिक लगानीका कारण आफू सांसद चुनिएको उनको दाबी छ । कुराकानीका क्रममा उनले एमालेका विभिन्न तहका नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेको दाबीसमेत गरिन् । प्रस्तुत छ, दीपेन्द्र विष्टले उनीसँग गरेको कुराकानीको सारांश :
तपाईको पार्टीमा योगदान के थियो ? महेन्द्रकुमार गोल्छाको सुमन प्याकुरेल, सुवोध प्याकुरेलसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो, जब मदन भण्डारीले ‘श्रम कानुन’ लागू गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो, त्यो बेला महेन्द्रकुमार उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष हुनहुन्थ्यो । श्रम कानुन लागू गर्ने विषयमा महेन्द्रकुमारको ठूलो योगदान छ । त्यसले गर्दा म एमालेमा प्रवेश गरेकी हुँ । किनकी महेन्द्रको नामलाईम निरन्तरता दिन चाहन्थे । भरतमोहनजी अर्थमन्त्री हुँदा महेन्द्रजीलेश्रम कानुन लागू गर्न र अर्थनीति बनाउनमा योगदान गरे । त्यसैले मेरो झुकाव बढी एमालेप्रति थियो ।
म सुरुदेखि भन्छु । केपी सर र माधव नेपाल सरले कहिल्यै केही माग राख्नु भएन । महेन्द्र गोल्छाकै योगदानका कारण उहाँहरुले मलाई पार्टीमा ल्याउनुभयो । सभासद बनाउनुभयो । तर पार्टीमा झलनाथजी र पार्टीका अन्य व्यक्तिले सिधै पैसाको कुरा गरे । त्यो कुरामा मलाई चित बुझेन । किनभने पार्टीमा केपी र माधव नेपाल जस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको म सम्मान गर्छु जसले कहिल्यै पैसाको कुरा गर्नुभएन । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको कारण पनि मलाई हटाउन खोजेको हुनुपर्छ ।
तपाईको स्वास्थ्य बिग्रेको छ । स्वास्थ्यभन्दा अरु केही हुन सक्दैन । आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस भन्नुभयो । त्यसपछि म उहाँकै सम्पर्कमा थिएँ । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको थिएँ । उहाँको निर्देशन मानेकी थिएँ । तर पार्टीभित्र केही व्यक्तिले मलाई मानसिकरुपमा थ्रेट दिएर काठमाडौं आउन दिएनन् र धम्क्याए पनि । त्यो पार्टीका अधिकांश नेतालाई थाहा छ । धम्क्याउने को थिए ? केही युवा संघ सम्बद्ध व्यक्तिहरु हुन् । मलाई काठमाडौं प्रवेश गरेपछि ज्यान जोखिममा हुने भन्दै धम्की दिए । यो कुरा मैले केपी सर, माधव नेपालसँग गरेकी छैन।
पार्टीमा मेरो आर्थिक लगानी पनि ठूलो छ भन्दै हुनुहुन्छ । कति जति छ ?
मैले पार्टीलाई १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्वेच्छाले सहयोग गरेकी छु । जम्मा गरी मैले सात करोड रुपैयाँ बुझाएकी छु । त्यसैगरी, संविधान सभामा निर्वाचनमा मैले पार्टीलाई शारीरिकश्रम तथा ठूलो आर्थिक सहयोग गरेकी छु । म एक मधेसी महिला, एकल महिला, उद्यमी महिला हटाएर पार्टीले कुनै ठूलो काम गरेजस्तो लाग्दैन । यसले पार्टीको बद्नाम गरिसकेको छ । मलाई पार्टीले आन्तरिकरुपमै हल खोजेको भए हन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । संचारमाध्यमसँग बोल्न बाध्य बनायो ।
मेलै सम्पूर्ण कुरा त्यागेर महेन्द्र गोल्छासँग बिवाह गरेकी हुँ । महेन्द्रले पार्टीमा गरेको योगदानबारे मेरै किताबमा सुबोध प्याकुरेलले खुलेरै लेखेका छन् । मलाई पार्टीले किन हटाउन खोज्दैछ म जवाफ माग्न चाहन्छु । यो लडाईं लडेर मात्रै म पार्टीबाट बाहिरिन्छु ।
सभासद बनाउन पैसाको कुरा गर्ने को थिए ?
झलनाथ खनालले सिंधै पाँच करोड सहयोग नगरे सभासद बनाउन नसक्ने कुरा गरे । त्यो बेला गंगाधर तुलाधरसँगै थिए । अनि, गोविन्द थापालेपनि १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगेका छन् । अरु कुरा सार्वजनिक गरेपार्टीमा ठूलो घाटा हुने भएकाले आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला । मसँग सबै प्रमाण छ । अहिले म सार्वजनिक गर्न चाहन्नँ । युवा संगठनका भूपाल राई, परशुराम बस्नेत र निरु पाललगायतले ६२ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । बकाइदा लिखित रुपमा दिएका छौं । विनोद ढकाललाई २५ लाख रुपैयाँ, राजविराजका सुमन प्याकुरेल र उनकी छोरी सुज प्याकुरेल, उनकै छोरा सुयसको घरमा केपी सर गएकै बेला विनोद ढकालहरुले बार्गेनिङ गरेर ५० लाख रुपैयाँ, ऋषि पोखरेलले १० लाख रुपैयाँ लगे । त्यो क्षेत्रका केपी ओली सर्मथकलाई ५ लाख रुपैयाँ भन्दा मैले कम सहयोग गरेकी छैन । केपी ओली प्यानलका गोविन्द थापा, सुमन प्याकुरेल, गोविन्द ढकालहरुले महिलाको व्यवसायिकीकरण गर्ने काम गरे ।
गोल्छा परिवारको बुहारीको यस्तो स्थिति छ भने अरुको के होला ? अरुले तपाईसँग कति पैसा मागे ?
झलनाथ खनाललाई एकजना राईथरका भाईमार्फत आर्थिक बाहेक उनको निर्वाचन क्षेत्रमा इलाम जानआउन कति सहयोग गरे भन्ने लेखाजोखा नै छैन । उनले महेश रेग्मीकै अगाडि फोनमार्फत व्यक्तिगत २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने धम्की दिए । ईश्वर पोखरेललाई सहयोग गरें । गोकर्ण विष्टलाई १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी । त्यसैगरी, विद्या दिदीलाई २५ लाख रुपैया दिएँ । उहाँलाई मैले आफ्नै नाममा चेक काटेर दिएकी छु । उहाँकै नाममा काट्न खोजेकी थिएँ, मान्नु भएन । गंगाधर तुलाधरमार्फत माधव नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरें । पार्टीको माथिल्लोस्तरका सबै नेतालाई सबैलाई सहयोग गरेकीछु ।
मसँग पैसा पुगेको छैन भन्नुहुन्छ । मलाई थाहा छैन भन्नु हुन्छ ।
Previous : राष्ट्रपति निर्वाचन समेत मोर्चाले वहिष्कार गर्ने
Next : सखडा बजारमा मसाल जुलुस र सभा